Waamicha Qabsa’oota Bilisummaa barbaadanf
Ilaalchi Amanta leelisu, Ganda, Ayyanalalatumma, Fayida fi Tefoozo barbaadun dhabamsiisuf waraaqisa jijjirama fi bilisummaa gegesu qabana !!!.
Dhimi OMN kun rakko nama lama giduti adeema jiru miti, seera fi heera jaarmiyaan OMN (organization) tokko qabu caabe jira. Kuns homa miti, media saba Oromoon dhaabate, gargarsa saba Oromoon deema jirutu sagalee Oromoof ta’uu dhiise sagale Oromoo ukamasa jira. OMN Oromoo mirga demokrasi dhabe falmata jiruf fakkenya demokrasi, iftomina fi qulqulinan hojeechuun hafe PLC nama tokko ta’ee jira. Oromoo ganda tokkon faarfamaa adeemun egere Oromoo hunda irratti dhiiba qaba jeedhama jira. Haala amma OMN deema jiru kun saba keenya gara qoodumsatti geessaa malee gara tokkummati hin fidu jeedhma jira. Kun ammoo gara waldhabde gudati deemu mala. Namni tokko yeroo rakkoo fidu ammo isaa salfachuun ykn sodachuun ykn ammoo gosa kooti jeedhani cuubuu isaa dhoksun uummmata Millionaa balaf saxiluu mala. Waanuma feedhe yoo ta’e namni tokko saba tokko oliti ilaalame badin isaa agugamefi akka rakkon tokko hin jireti bira darbamu qaba warii jeetan dogogoortan jirtu. Of ilaalu qabdu jeedhama jira, waan saba Oromoo nuuf caaluu lafa kana irra jirachu hin qabu.
Dhaabbile Oromo heddun, hayuulee Oromoo heddun yeroo dogogoori adda addaa waga 3 guutuu rawwatamu caaliftan ilaala turtan, kana ammoo utuu dogogoora kana beektan walin diibee rukkuta turtan. Kan ammoo media ykn nama kana yoo xuqne gartuu (Teefoozoo) baayee waan qabuuf nu irratti duulchisa jeedhan caalisan. Inni kan ammoo mediatti ba’ee duubachufin caaraa dhaba jeedhe utuu rakkoo arguu kan nama faarsaa ture baayeedha. Kun hundi waan nama qaanfachiisuu dha. Oromoon safuu qaba waan hundaf, Oromoon waan hunda anaaf haata’uu hin jeedhu, ni salfaata, ykn ni safeefata. Namni safuu hin beekne nyara haadate jeedhama hawwassa keessatti bakka hin qabu. Keesummatti median saba barsisuuf ka’ee dogogoora fi goocha hamma hojeechun uummataf fakeenya gadhe ta’uu hin qabu. OMN TVO caalaa erga mirga gazeexeesa dhiiba ta’ee mirga Oromoo atamitin kabachiisa? Kun ilalaamu qaba. Akkuma seera Malamaltumma, seera Teeroorsti, Seera NGO wayyannen ittin nama hidhuuf baftu ta'e, OMN Abdi Fiixe tokkti FB irra uguruuf seera hin jiree basa erga ta’ee hojii TPLF kopy isaa hojeechuu dha.Yeroo namni dogogoora hojeetuu caalisan ilaalun degerun badii guda fida malee namicha sana hin gargaaru, seeran qeequun garuu akka dhaabate of ilaalu isaa gargara warii gartuun wal gurmeese lammi hunda irratti duuluu kana ilee hin beeku.
Namoon biyyaa keessaa hundi keenya OMN irra jiiba akka qabnu fi irratti hirmaachuu akka nu hin barbaaneti ykn ammoo soochii tokko ilee akka goocha hin jireeti fudhaachuun gaafi nuu gaafatu. Miseensoon ABO fi Ogannon ABO kkf dhaabilee heddun OMN irraa hin jirtan maliif caalisatani ciiftuu nuun jeedhu. Namni isuma hanga fulii isaa luqa’uuti suura isaa TV irratti argisifatu ilaalalu waan ta’eef. Oromoon mal jeedha namni guyyaa hunda argan fulii isaa ni rakkasa ykn ni busha’a jeedhu, bubulee arguu iyuu nama jibisisa jeedhu. Media maliif? Yoomi? Bu'aa mal argaachuuf ykn dhaamasa mali dabarfaachuuf barbaana jeedhame mediati namni dhamsaa ciima dabaarfachuuf yeroo barbaadu dhiyata male media irratti ba’aani ilkan argisisun qabsa’a nama hin goodhu ykn nama saba isaaf quqame nama hin jeechisisu. Olola media TPLF fi ESAT irra Oromoo irratti gegefamu ittin mormachuuf media Oromoon dhaabate ijjoolee Oromoo nama akka Mohammed Yasin, Mohammed Ademo, Tigist Game, Lalise Brihanu, Elemo, Bafaqadu Moroda, Alemayehu Qana, Dr. Solomon Ungashe, Dr. Hamza Abdurezak, Daniel Bariso Areeri, Tesfaye Dheeressa kkf nama tokkon ari’amun goocha Zelalem Jamanhe Gazeexeesitoota ORT irratti raawwaten tokko.
Kanaafuu Dhaabbileen Oromoo, hayuuleen Oromoo, jarsoolin Oromoo waluma gaalati hawwaasi Oromoo wa’ee nama tokko ykn dhaaba tokko dhiiphachuu dhiise wa'ee egere Oromof jeecha, waldhabdiin namaoota dhuunfaa gara uummatatti akka gadii hin bunef jeecha, gara amantati akka hin ciinef, lola fi jeequmsa akkasummas wal dura dhaabachuun akka hin dhufnef jeecha tarkanfi fudhachuun barbachisaadha.
Boordiin OMN, jarsooli, hayuuleen Oromo fi Haawwaasi Oromoo rakkoo OMN keessaa jiru dura namoota Ari’ataman kassee hanga Abdi Fiixeti hunda yaada isaan waame rakkoo isaani qoorate yaada murte waliin media wallaban uummataaf ibsu;
Hangasiti garuu Afaan Oormii dhaga’uun Olola adeema jiru kun diinaf akka nu hin saxiilef gartuun hunda of qusachu qabu;
TPLF fi warii Habasha caaraa kanati fayyadamani Oromoo keessatti Olola babalisa jiru waan ta’eef Oromoon waan hamilee qeerroo Oromoo cabsu irra akka of qusatan;
Unni male namni hin jiru yoo nuu hin jire Oromoo ni bada warii jeedhan ilee of qusachuu qabu, abban qabsoo uummata Oromoo ta’uu ilee beekuu qabu.
OMN Saba Oromoo hunda hammate hin jiru, hirmachisa hin jiru, mada jeequmsa ta’ee jira erga ta’ee media wallaba dhaabba ykn nama dhuunfa tokkon hin to’atamne akka ijaramu goochu.
Oromoo hundi Amanta kam iyuu leelisuu fi gandan wal gurmeesu iffaati balaalefachuu qaba, Oromoon Isalama ykn Kirstiyana miti nuu Oromoo dha jeechu qabna akka gootota harka somaleeti wareegaman.